Torolàlana momba ny fametrahana ny mena Cedar Shingles
Finday: +86 17749700640
Voalohany, teknolojia fananganana shingle
1 Fomba fanamboarana zaridaina sedera
Fananganana tabilaon'ny famafazana katsaka → Fanamboarana eny ambonin'ny rano → Fanamboarana taila mihantona → Fananganana taila tampon-trano → Fanamboarana iraisana → fanamarinana
2 Torolàlana fametrahana ny tafo shingle
2.1 Fananganana fototra
Rehefa avy nandray ny tafontrano sy miomana amin'ny fanamboarana izy dia tokony hatao aloha ny fizotra manaraka ny fantson-drano. Araka ny fepetra takiana amin'ny sary, ny teboka avo indrindra voalohany amin'ny mais dia voafantina ho haavon'ny referansa, ary io teboka io dia raisina ho toy ny teboka voatondro momba ny haavon'ny katsaka, avy eo ny haavon'ny infrared dia ampiasaina amin'ny fametahana sy fametrahana, ary ny ny haavon'ny katsaka dia voatazona amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny fandrefesana. Io dia mamaha amin'ny fomba mahomby ny fijerin'ny sary vokatry ny tsy fitoviana amin'ny halavan'ny katsaka. Ny fomba manokana dia aseho amin'ny endrika ：
① Manomboka amin'ny cornice S1, apetaho amin'ny taratra infrared izy io, raiso ny teboka avo indrindra amin'ny datum point, atsofohy avy any atsinanana ka hatrany andrefana, ary fantaro ny haavon'ny katsaka atsimo manamorona ny rano.
② Manomboka amin'ny S2, haavo amin'ny taratra infrared, raiso ny teboka avo indrindra toy ny teboka datum, miakatra avy any atsinanana ka hatrany andrefana, fantaro ny haavon'ny sehatra afovoany eo afovoan'ny barn-drano, ary ampifandraiso amin'ny teboka S1 misy tsipika fotsy.
③ Manomboka amin'ny cornice S3, ampiasao taratra infrared ka hatrany amin'ny haavony, raiso ny teboka avo indrindra toy ny teboka datum, miakatra avy any atsinanana ka hatrany andrefana, ary fantaro ny haavon'ny katsaka Avaratra manamorona ny barin'ny rano.
①Ny famaritana ny ranonorana dia tsy latsaky ny 50 mm * 50 (H). Ny fantsom-baravarankely MM amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alikaola dia ampiasaina. Voalohany, ny tsipika misy ny tsipika hilomano dia hipetraka amin'ny tampon-trano arakaraka ny fepetra takian'ny 610mm. Ny mpampitohy vy 2mm matevina dia hampiasaina, ary ny sombin-javatra 3 dia hampiasaina araka ny takian'ny elanelam-potoana 900mm Ø 4.5 * 35mm fantsika vy miraikitra amin'ny sosona hoho, ary avy eo ny bolt fanitarana m10nylon dia ampiasaina hamakivakiana ny bara hilatsaka ho an'ny fanamafisana ny fitsaboana. Ny elanelan'ny fanamafisana dia eo amin'ny 1200mm eo ho eo ny torolàlana ho an'ny bara hilatsaka ho an'ny fambolena aorian'ny fambolena, ary ny bara hilatsaka dia hamboarina marindrana. Ny bara hilatsaka any ambany dia haoritra mitovy, ary hapetraka tsara sy mafy ny hoho. Raha noho ny olana ara-drafitra dia tsy azo apetraka akaikin'ny firafitra ny fantsom-pifamoivoizana, dia mety ho feno Styrofoam eo anelanelan'ny fantsom-pifandraisana sy ny elanelana eo amin'ny rafitra.
②100 * 19 (H) mm fumigation hazo miady amin'ny harafesina (atin'ny hamandoana 20%, fatra amin'ny hazo anti-harafesina 7.08kg / ㎡, 400-500kg / density ny hakitroky) no ampiasaina amin'ny tadin'ny hazo mihantona. Ny dingana voalohany dia eo amin'ny 50 mm eo ho eo ny halaviran'ny katsaka, ary ny dingana faharoa dia manodidina ny 60 mm miala ny sisin'ny tampon'ny havoana. Visy vy 304 tsy misy vy Ø4.2 * 35mm roa no hampiasaina hanamboarana ilay tadin'ny hazo mihantona amin'ny tsipika hilatsaka. Ny tsipika fanantonana taila dia hasiana mari-pahaizana mitovy, ary ny fantsika dia hapetraka fisaka sy mafy orina, mba hahazoana antoka fa fisaka ny tampon'ny taila, milamina ny laharana sy ny tsanganana, tery ny fifampitohizana ary mahitsy ny katsaka. Ary farany, hatao ny fizahana tariby bandy.
2.3 Fananganana membrane tsy misy rano sy mifoka rivotra
Aorian'ny fametrahana ny tsipika mihantona taila, zahao fa tsy misy zava-maranitra mipoitra avy eo amin'ilay tadiny mihantona amin'ny tafo. Aorian'ny fanaraha-maso dia apetraho ny membrane tsy misy rano sy mifoka rivotra. Ny fonosana tsy misy rano sy mifoka rivotra dia hapetraka amin'ny alàlan'ny lalan'ny rano mankamin'ny ankavia sy ankavanana, ary ny valan-java-manidina tsy tokony ho latsaky ny 50 mm. Hapetraka hatrany ambany ka hatrany ambony izy, ary 50 mm ny tadim-pofoany. Mandritra ny fametrahana ny membrane tsy misy rano sy mifoka rivotra, dia apetraka ny taila tampon-trano, ary hotapahina ilay fonosana tsy mahazaka rano sy mifoka rivotra.
Ny polypropylene sy polyphenylene dia ampiasaina ho toy ny membrane tsy misy rano sy mifoka rivotra, ary ny membrane PE no ampiasaina eo afovoany. Ny fananana mihenjana dia n / 50mm, longitudinal ≥ 180, transverse ≥ 150, elongation% amin'ny hery lehibe indrindra: transverse and longitudinal ≥ 10, permeability rano dia 1000mm, ary tsy misy famoahana ao anaty tsanganana rano mandritra ny 2h.
2.4 Fanamboarana taila mihantona
Ho an'ny fananganana mihantona vita amin'ny taila, ampiasaina amin'ny fametahana takelaka mihantona amin'ny tady mihantona ny taila arakaraka ny toerana misy ny lavaka taila, fantsika roa no ampiasaina isaky ny sombin-javatra, ary visy vy 304 vy Ø 4.2 * 35mm no ampiasaina amin'ny fantsika mihantona vita amin'ny tile . Ny filaharan'ny kapila mihantona dia hatrany ambany ka hatrany ambony. Ny takelaka fonosana dia apetraka aorian'ny fametrahana ny taila ambany. Ny tile ambony dia mifamadika amin'ny tile ambany ambany manodidina ny 248mm. Mifamadika mafy amin'ilay taila ny taila tsy misy fitoviana na tsy milamina. Raha sendra tsy fitoviana na tsy milamina dia mila amboarina na soloina ara-potoana ny taila. Ny tsipika tsirairay amin'ny vala vita amin'ny tile dia tokony hitovy amin'ny tsipika mahitsy. Mba hahazoana antoka fa ny sisiny dia mitovy amin'ny tsipika iray, ny node cornice dia tokony hokarakaraina tsara.
Ny laharana ambony dia tokony hanarona ny banga eo anelanelan'ny sakana roa ao amin'ny tsipika ambany, ary ny toeran'ny fantsika dia tokony ho afaka manarona ny andalana faharoa amin'ny zingles. Noho izany, ny laharana voalohany matetika dia sosona roa sosona. Ny elanelana iray miala ny tampon'ny laharana voalohany dia mihombo amin'ny fametrahana ny laharana faharoa. Ny laharana faharoa dia tokony hanarona ny banga sy ny lavaka fantsika amin'ny laharana voalohany amin'ny zona ambony. Ny shingles sy ny tantera-drano dia tanterahina miaraka amin'ny fotoana iray, sns. Izany hoe, zana-tsiranoka iray, sosona tsy tantera-drano, mba tsy hiteraka fivoahan'ny rano ny rano roa sosona.
2.5. Fametrahana ny tile Ridge
Ny taila tampon-kavoana dia apetraka tsiroaroa. Voalohany, amboary ny tsipika fanantonana taila amin'ny tsipika mitsangana amin'ny volo fanoratana tena, alaharo ny haavony ary alao antoka fa tsy misy fiovana. Eo am-pofoan'ny vatan-kazo lehibe sy ny tampon-tampon-kazo, apetraho eo ambonin'ilay havoana ilay fametahana tantera-drano tsy miovaova. Ny akora mifatotra dia voaisy tombo-kase mafy amin'ny vainga-tampon'ilay tampon-trano, ary avy eo amboary ny rindrina eo an-jorony roa amin'ny tady mihantona vita amin'ny visy. Ny takelaka an-tampon-tampon-kavoana dia tokony hosaronany tsara sy mifanelanelana.
2.6 tatatra mihidy
Ny tatatra mihinana (izany hoe ny tatatra) dia apetaka miaraka amina tonta. Ny birao fanarian-drano aliminioma dia hapetraka amin'ny toeran'ny tatatra mirona aloha, ary avy eo apetraka ny taila. Tapaka ny tsipika fitetezana isaky ny tehezan-tendrombohitra. Ny tsipika fanapahana dia ny tsipika afovoan'ny tatatra, ary ny fantsom-panafarana ny tatatra mihodina dia hokarakaraina amin'ny lakaoly. Ny hady kely fantsona fohy dia apetraka amin'ny alàlan'ny fametahana volo, ary ny tombo-kase dia mihidy tombo-kase amin'ny farany. Rehefa tsy dia lava loatra ny fizarana iray amin'ny takelaka fitehirizana, dia horaisina ny fomba fizarana fizarana maro, ary manomboka eo ambany ny fametrahana azy. Rehefa manasaraka, ny fizarana ambony dia tsindriana eo amin'ny faritra ambany amin'ny takelaka misy ny lakan-drano, ary ny mifanindry amin'ireo faritra roa dia tsy latsaky ny 5cm.
2.7. Fametrahana fefy vy sakana
Fametahana gadona katsaka: ny makarakara katsaka dia vita amin'ny takelaka vita amin'ny hazo namboarina miaraka amina fitaovana mitovy amin'ilay taila vita amin'ny hazo, izay ahodina sy apetraka arakaraka ny tena zava-misy eo amin'ilay toerana. Izy io dia miorina amin'ny tadin'ny taila mihantona miaraka amin'ny elanelana 300 mm. Ny fehezam-boninkazo eo anelanelan'ny zana-kazo dia milamina sy fisaka.